/ဘ‌‌လော့ခ်/အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု/ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံး-ရောင်းအားအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Powder ဖြည့်စွက်
အပေါ် Posted 09 / 01 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု. ဒါဟာရှိပါတယ် 58 မှတ်ချက်.
ထိုအချိန်ကအဖြစ်အဆီလျှော့ရည်ညွှန်းပထမဦးဆုံးကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, နှောင်းပိုင်း 1800s အတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအချို့ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်က 1960s သည်အထိအသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်ဆက်လက်။
Dinitrophenol အဖြစ်လူသိများအသစ်ဆေးဝါးအဆိုပါ 1930s မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲအတွက်အတော်လေးလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကိုယ်အလေးချိန်လွယ်ကူချောမွေ့, ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း thermogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အလယ်ပိုင်း 1950s ခုနှစ်, အမ်ဖီတမင်းရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်နှင့်အရှေးခယျြမှုများ၏ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ထွက်လှည့်။ ဒါဟာအစာစားချင်စိတ်နှိပ်ကွပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန် facilitated ။ ဝမ်းနည်းစရာက 1968 အတွက်စျေးကွက်အတွင်းမှယင်း၏ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့, အဆုတ်သွေးတိုးရောဂါ၏အန္တရာယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါ 1970s ခုနှစ်, ephedrine ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်သတ်မှတ်ကုသမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသို့သော်ကအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာကြေညာခံရမှုကြောင့်အချို့သောဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုမှုကိုခံလိုက်ရတယ်။
1973 ခုနှစ်, fenfluramine တစ်ဦးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်အဖြစ်အတည်ပြုဖြစ်လာခဲ့သည်။ က fen-phen အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးကိုဖန်တီးရန် phentermine နှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါ၎င်း၏လူကြိုက်များ 1992 အတွက်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာမူးယစ်ဆေး 1997 အတွက်စျေးကွက်အတွင်းမှယင်း၏ဆုတ်ခွာဖို့ဦးဆောင်အရာအချို့ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ, စေ၏။ အဆိုပါ 21st ရာစုတှငျဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖော်မြူလာအပေါ်အခြေခံပြီးအများအပြားကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး, စျေးကွက်ရေလွှမ်း။
(1) ခံတွင်းဖိနှိပ် (အစားအသောက်)
အစားအစာစားသုံးမှုကိုလျှော့ချသည်ဟုမူးယစ်ဆေးဝါး sympathomimetic အေးဂျင့်ဟုခေါ်ကြသည်။ အစောပိုင်းကပုံမှန်အတိုင်းထက်မွတ်မပြေနိုင်သော inducing နေချိန်မှာသူတို့ကများသောအားဖြင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်း။ မွတ်မပြေနိုင်သောအစားအစာကိုယူပြီးထံမှရရှိသောက "အပြည့်အဝ" ခံစားချက်သို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အစာစားချင်စိတ် noradrenaline NA () အဖြစ်လူသိများစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်သောလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ neurotransmitter, န်းမှာအားဖြင့် function ကို suppressants ။
ဒီဆေးတွေနဲ့ NA နဲ့ဆင်တူဓာတုဖွဲ့စည်းပုံမျှဝေနိုင်; noradrenaline ကဲ့သို့တူညီသော receptors မှရလဒ်ချည်နှောင်အဖြစ်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းလူ့ဦးနှောက်၏ "နို့တိုက်ကျွေးရေးစင်တာ", အ hypothalamus အတွက် noradrenaline လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ လူ့ hypothalamus ခန္ဓာကိုယ်စနစ်စွမ်းအင်ဟန်ချက်ထိန်းချုပ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုစွမ်းအင်စတိုးဆိုင်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များအစားအစာစားသုံးမှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းညှိပေးသော hypothalamus အတွက်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက် binding နှင့်လှုပ်ရှားမှု Noradrenaline အစာစားချင်စိတ်ပေါ်တစ်လျှော့ချအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေးများပါဝင်သည်:
(2) အဆီ Burning
အရှုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများကူညီနိုင်ပါတယ်အဆီလည်းမီးလောင်အလေးချိန် အဆီဆုံးရှုံးမှု , မတရားသောအသေးအဖွဲဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်နှင့်ကျန်းမာစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းသည်။ သူတို့ကအစစွမ်းအင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းအလားအလာတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေးများပါဝင်သည်:
ဤရွေ့ကားအလေးချိန်အရှုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများအစားအစာထဲမှာအထူးသဖြင့်အာဟာရကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အစာခြေစနစ်၏စွမ်းရည်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဥပမာ, Orlistat အဆီပြိုကွဲပိတ်ဆို့ဖို့လူသိများထို့ကြောင့်အဆီစုပ်ယူမှုကိုတားဆီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားဖြည့်စွက်ကယ်လိုရီစုပ်ယူမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်အစာခြေဟန့်တားအတွက်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။ ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့ကအောက်ပါထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းပိုမိုဆွေးနွေးကြမည်:
Sibutramine HCL လူကြိုက်အများဆုံးစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာနောက်မှမွတ်မပြေခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ receptors မှခညျြနှောငျသောဦးနှောက်ထဲမှာ serotonin နဲ့ NA အဆင့်ဆင့်နှစ်ဦးစလုံးမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်များတွင်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ် Sibutramine ကုသမှု 4.6 ဖြစ်ပေါ်စေမည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တယောက်တည်းနေတဲ့အစားအစာထက်ပိုကိုယ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်။ အစားအစာစားသုံးမှုလျှော့ချအတူ sibutramine ကိုလည်းတွေ့ရှိထားပြီး:
• comorbid ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်နေလူနာအတွက်အသှေးကိုဂလူးကို့စ Enhance
• lipid ပရိုဖိုင်းကို Enhance
• C-peptide, အင်ဆူလင်နှင့်ယူရစ်အက်ဆစ်၏ Boost အဆင့်ဆင့်
Sibutramine HCL ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
Lorcaserin HCL (Belviq) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ် Lorcaserin HCl မူးယစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး 2012 ထက်ပိုတဲ့ BMI နှင့်အတူလူအဘို့နှင့်လည်း, သွေးဖိအားမြင့်မားတဲ့လက်စထရောရှိသည်, 30 ဆီးချိုရောဂါရိုက်ထည့်တဲ့သူကပိုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ် Mass 27 ၏အညွှန်းကိန်းသို့မဟုတ်တွေနဲ့လူနာတွေအတွက်တစ်နှစ်2အတွက် FDA ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကိုလည်းလျော့နည်းတာကိုအပြီးအပြည့်အဝခံစားရရန်လူနာများကူညီရန်နိုငျသောလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ serotonin 2CV အဲဒီ receptor မြှင့်တင်ရန်လည်ပတ်သော။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့, (type ကို 38 ဆီးချိုရောဂါမပါဘဲ) အရွယ်ရောက်ပြီး 2% ရလဒ်များအရအိပ်ယာနဲ့ကုသအရွယ်ရောက်%5မှနှိုင်းယှဉ်လျှင်, သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထက်ပို 16% ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Rimonabant HCL ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
Rimonabant HCL မူးယစ်ဆေးထူးခြားတဲ့ရွေးချယ် cannabinoid-1 (CB-1) အဲဒီ receptor ရန်အဖြစ်အရေးယူ၎င်း၏ဝတ္ထု mode ကိုမှကွဲပြားကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။ Endocannabinoids သည့် CNS အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ lipogenesis, အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အဆီစုဆောင်းခြင်းကိုလှုံ့ဆော်နေကြသည်။ အဆိုပါ Rimonabant HCL လုပ်ဆောင်ချက်များကို endocannabinoids သက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ရန်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးလျင်မြန်စွာစုပ်ယူသည်။ အဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်လူနာကုသ၌ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုရီယို (အဝလွန်ခြင်းအတွက် Rimonabant) အစီအစဉ်အဖြစ်လူသိများလေးထိန်းချုပ်ထား, ကျပန်းစမ်းသပ်မှုတွေ၏အစီအစဉ်တွင်လေ့လာခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ ဤအစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ဒီမူးယစ်ဆေး orlistat နှင့် sibutramine အဖြစ်ထိရောက်သောဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
2,4-Dinitrophenol (DNP သို့မဟုတ် 2,4-DNP ဏ) ဒီပုံသေနည်းများနှင့်ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အော်ဂဲနစ်ဓာတုဖြစ်ပါသည်: HOC6H3 (NO2)2။
ပရိုတွန်အတွင်း mitochondrial အမြှေးပါးကိုဖြတ်ပြီးပေါက်ကြားထို့ကြောင့် ATP synthase ကျော်လွှားတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တစ် protonophore အဖြစ် DNP functions များ, ။ ဤသည် ATP စွမ်းအင်ပေါင်းစပ်လျော့နည်းထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေနဲ့အသက်ရှူနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့စွမ်းအင်အချို့ကိုအပူ၏ပုံစံအတွက်လျော့နေသည်။
အဆိုပါစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းခေါ်ဆောင်သွားမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆေးထိုးတိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ မူးယစ်ဆေးထိုးတိုးအဖြစ်, စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုမတတ်နိုင်သောဖြစ်လာသည်, ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုတိုးပွါးလာ (နှင့်အဆီမြင့်မားသောငွေပမာဏကိုမီးရှို့သည်) စွမ်းအင်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းအဘို့အလျော်ကြေးပေးရန်။ DNP uncoupling oxidative phosphorylation လူသိများအကောင်းဆုံးကိုအေးဂျင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ATP synthase အားဖြင့်လူတွေလည်းရှိနေတယ်၏ Phosphorylation ဓာတ်တိုးခြင်းမှ "uncoupled သို့မဟုတ်ပြတ်တောက်ရရှိသွားတဲ့။
(2) အဆီ Burning ယန္တရား
ဒြပ်ပေါင်းများကို p-synephrine တစ်ခု alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးသဘောသဘာဝ၌တွေ့စေခြင်းငှါအရာအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများပေမယ့်အနိမ့်ပြင်းအားကြောင်းဆိုလိုသည်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်နိုက်ထရိုဂျင်ရှိပါတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်, နီကိုတင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်လည်းသုတေသီများအဆိုအရ alkaloids ၏အတန်းပိုင်။ Synephrine ပုံမှန်အားဖြင့်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို Synephrine ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကအလုပ်လုပ်ပါသလဲ?
p-synephrine အတွက်ဓာတုပစ္စည်းအညိုရောင်အဆီထဲမှာ thermogenesis နှင့် lipolysis အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းβ3 adrenergic receptors ကိုနှိုးဆွခြင်းအားဖြင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဤ receptors စွမ်းအင်အဘို့အဆီကိုမီးမရှို့ရန်သင့်စနစ်ကို enable မည်ဟုဆိုလိုသည်။
Dimethylamylamine အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဓာတုထုတ်လုပ်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ 1,3-dimethylamylamine (DMAA) ဒါဟာနှာခေါင်း decongestant အဖြစ်အစပိုင်းတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းခံခဲ့ရသည်အမေရိကန်ရောင်းချအားကစားဖြည့်စွက်အတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအရာတခုစိတ်ကြွဆေးဆင်းသက်လာသည်။ ယနေ့ခေတ် dimethylamylamine ကိုယ်အလေးချိန်, ADHD (အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactive ရောဂါ), ကာယဗလနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်အတွက်အသုံးပြုမယ့်ကြံ့ခိုင်ရေးမူးယစ်ဆေးအဖြစ်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Clen အဖြစ်လူသိများ Clenbuterol, တစ်ဦး decongestant နှင့် bronchodilator ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသာမန်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါက Steroid တစ်မျိုးကဲ့သို့ဒြပ်ပေါင်းများပေမယ့်မအစစ်အမှန် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာβ2 agonists ၏အမျိုးအစားသို့ကျရောက်ပါတယ်။
Clenbuterol adrenaline ဆင်တူဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအစပျိုးနိုင်ပါ။ ဒါဟာတစ်ဦး adrenergic သည့်စနစ်အတွက် beta ကို-2 အဲဒီ receptor Subtype မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဤသည်စခန်း (ဆယ်လူလာ Cross-ဆွေးနွေးချက်လိုအပ် ATP ရဲ့ဆင်းသက်လာ) ၏ increment မှု။ ရလဒ်အဖြစ်ပရိုတိန်းတစ်ဦးကတိုး kinase ။ ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက lipid, glycogen နှင့်သကြားဇီဝြဖစ်လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိသည့်အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏တိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးအဆီလည်းမီးလောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလှုံ့ဆျော။ ဒါဟာဖက်တီးအက်ဆစ်ဓာတ်တိုးအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုကနေတဆင့်အဆီလည်းမီးလောင်အတွက်အထောက်အကူပြုသောအခြားလမ်းကြောင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။
မီးရှို့အဆီထို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖျော်ဖြေများအတွက်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမှာတစ်ဦးတိုးမှဦးဆောင် ATPs လွှတ်ပေးရန်ဖို့ mitochondria လှုံ့ဆော်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဇီဝြဖစ်ကိုကူညီပေးနေနှုန်းတစ်ခုတိုးလာကြောင်းလူသိများသည်။
Salbutamol ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (Albuterol)
Salbutamol နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါနှင့်ပန်းနာရောဂါနှင့်သို့မဟုတ်အခြား COPD-related မမှန်ဆကျဆံတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ဆေးရဲ့ mode ကိုတစ်ဦးစူးရှသောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းအဆုတ် '' အသက်ရှူကျမ်းပိုဒ်မဖွင့်သို့မဟုတ် dilating ဖြစ်ပါတယ်။ Salbutamol တစ်လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကတည်းကတချို့လူတွေကအဆီသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်ဤပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါမူးယစ်ဆေးကိုသုံးပါ။
ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလိုအန်ဒရိုဂျင် system ပေါ်တွင်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Albuterol ကိုယ်အလေးချိန်အစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြွက်သားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ခြုံငုံအလေးချိန်လျော့နည်းစေတယ်လေ။
ဒါဟာထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်အဆီဆုံးရှုံးဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒေသများထံမှနောက်ထပ်အဆီပယ်ဖြတ်ဖို့ကာယဗလအားဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကာယဗလနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဘို့ဤမူးယစ်ဆေးယူပြီးသောအခါ, အများဆုံးမကြာခဏဆေးလုံးသို့မဟုတ်အရည် form မှာယူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအလေးခြိနျအတှကျ Salbutamol မွှန်ကိုသုံးပါနိုင်ပေမဲ့သို့မဟုတ် အဆီဆုံးရှုံးမှု ကရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာလျှင်။
Orlistat တစ်အစွမ်းထက်ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ် lipase inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအစားအသောက် triglyceride ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ် lipases ၏အကူအညီနှင့်အတူ metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ lipases enzymatically အကြာတွင်အသေးစားအူထဲမှာစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်အခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်သို့ triglyceride ဖြိုဖျက်။ အစာအိမ်နှင့်ပန်ကရိယ lipase inhibitors မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ဤအင်ဇိုင်းတွေမလုပ်နိုင်အောင်ငယ်အူနှင့်အစာအိမ်၏ lumen အတွက်ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ် lipases နှင့်အတူခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ဤအ lipases ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏တားစီးမှတဆင့်ဓါတ်အဆီအစာခြေလည်း inhibited သည်, triglyceride ဟာမစင်ထဲမှာပြန်ထွက်သွားသည်နေကြသည်။ Orlistat ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်အစားအစာများကနေ (အစားအစာများအတွက်စွမ်းအင် 30 ရာခိုင်နှုန်းကို triglyceride အားဖြင့်ထောက်ပံ့သည့်အခါ) တွင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ထဲကိုစုပ်ယူခံရထံမှအာဟာရဆီ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုလှည့်ပတ်ကာကွယ်ပေးသည်။ Xenical (orlistat) နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲများပေါင်းစပ်နှင့်အတူတစ်နှစ်အကြာတွင်ပျမ်းမျှအလေးချိန်လျှော့ချရေးတစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 8.5 ကီလိုဂရမ်န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဓါတ် triglyceride ၏စုပ်ယူမှုလျှော့ချအတူ orlistat ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်တွေ့ရှိထားပါတယ်:
•လက်စထရောစုပ်ယူမှုကြောင့်လက်စထရောအဆင့်ကို (အတူတကွ LDL လက်စထရောလ်နှင့်အတူ) Reduce,
•အင်ဆူလင်ကိုခုခံ Enhance; နှင့်
•များသောထိန်းချုပ်မှု Boost ။
ဒါဟာကျယ်ပြန့် orlistat ရဲ့အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများတဲ့အနိမ့်အဆီအစားအသောက်များတွင်တင်းကြပ်စွာလိုက်နာဤဆေးပေါ်သောသူတို့ကိုအားပေးထားတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဖို့အလားတူလမ်းအတွက်ပြုမူသည်ဟုထင်နေသည်။
Cetilistat အနေနဲ့နှုတ်တက်ကြွ, ဝတ္ထု, ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း lipase inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။
Cetilistat ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးအဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ထုတ်လုပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပန်ကရိယ lipase ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်အစောပိုင်းက Xenical (orlistat) အဖြစ်လူသိများဆွေးနွေးမူးယစ်ဆေးကျွန်ုပ်တို့၏အူထဲမှာ triglyceride ဖြိုဖျက်သောအင်ဇိုင်းအဖြစ်အလားတူထုံးစံ၌လည်ပတ်သော။ ဤအအင်ဇိုင်းတွေမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်ထဲကနေ triglyceride စုပ်ယူနိုင်ပြီး undigested ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေဖယ်ရှားဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်သို့ကြေညက်ခံရခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ကြသည်။
အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါမပါဘဲနှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်နေအဝလွန်လူနာအဝလွန်လူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့။ Cetilistat ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်တဆယ်နှစ်လုံးကိုပတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သောအခါ, သိသိသာသာရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်စုစုပေါင်းလက်စထရော, သွေးရည်ကြည်အနိမ့်-သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်းလက်စထရောလျှော့ချ။
အနည်းဆုံးအား5ရာခိုင်နှုန်းခန့်၏အခြေခံခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလျော့ချရေးဖေါ်ပြခြင်းအဝလွန်လူနာများ၏ရာခိုင်နှုန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အားလုံးတက်ကြွစွာလက်နက်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ အဝလွန်ဆီးချိုလူနာမှာ HbA1c (glycosylated ဟေမိုဂလိုဘင်) အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ Cetilistat ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးအများစု orlistat အတွက်ထက်နိမ့်တစ်ခုဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူ steatorrhea (အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းသဘောသဘာဝ) ဖြစ်ပေါ်စေပျော့ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမှအလယ်အလတ်ပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးမကြာသေးမီကသည်အခြားရောဂါများနှင့်အတူအဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့ဂျပန်အတွက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုမှမြင်သည့်အတိုင်းကျယ်ပြန့်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကနေဆင်းသက်လာထားတဲ့အထဲကထိုအရပ်၌များစွာသောကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ်။ ဒီဆေးတွေ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်တွေ့ပါပြီ, သူတို့အချို့အဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုများအတွက်အနည်းငယ်ဖော်ပြမှ, ထိုကဲ့သို့သော FDA ကနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုကအတည်ပြုပြီ။
ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်သုတေသနပြုအများအပြားနာရီဖြုန်းပြီးနောက်ကျွန်တော်အနည်းငယ် 2018 ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး-ရောင်းအားအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Powder ဖြည့်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဤရွေ့ကားအလေးချိန်အရှုံးအမှုန့်ဖြည့်စွက် orlistat ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်နှင့် lorcaserin ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်တို့ပါဝင်သည်။ မည်သည့်မူးယစ်ဆေးစတိုးဆိုင်မှာတွေ့ရတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်၏ကင်လုပ်ခိုင်းမတူဘဲ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပြီသောဤကိုယ်အလေးချိန်ဆေးဝါးများဟာ FDA ကနှင့်အခြားတရားစီရင်မှုကနေခွင့်ပြုချက်တဲ့တံဆိပ်ခေါင်းရဖို့စမ်းသပ်ခြင်း၏နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်ဝင်ကြပြီ။ ကျနော်တို့အလွန်အမင်းသူတို့အကျိုးရှိစွာဒါပေမယ့်လည်းသုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံမသာဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြသောကြောင့်, သင်တို့သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကြိုးစားကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
6474 Views စာ
Mog Arten09 မှာ 21 / 2018 / 4: 11 ညနေ
ငါအဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုနှင့်အစာခြေဘို့ကွဲပြားခြားနားသောဆေးဝါးများရှိပါတယ်ကြိုက်တယ်။ အသုံးပြုသူများ '' အင်ဆူလင်ကိုခုခံခြင်းနှင့်များသောထိန်းချုပ်မှုကိုပိုမိုအစွမ်းထက်အောင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာမှီခိုဖြစ်နှင့်အသက်အဘို့ဒီဆေးတွေပေါ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါသော်လည်းစပ်စုမိပါတယ်။ ငါရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်တစ်ဦးလေ့လာမှုကိုမြင်ချင်ပါတယ်။
မိုင် Dubager09 မှာ 21 / 2018 / 4: 02 ညနေ
ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်တိုးတက်စေခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်တူသောအသံ။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ဖော်ပြထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများမဆိုဖော်စပ်နှင့်အတူမည်သည့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်လျှင်ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးကိုမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
imah09 မှာ 21 / 2018 / 10: 38 နံနက်
2018 အရောင်းရဆုံးကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။ ငါတကယ်ကဤလိုအပျကွောငျးလူများ, ကမှော်များကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သေချာသူတို့ကို out.I'm ကြိုးစားသင့်စဉ်းစားပါ။
wumi09 မှာ 21 / 2018 / 10: 30 နံနက်
ဈေးကွက်ထဲမှာအများအပြားကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ပေးသွင်းရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားဖြစ်စေရန်, ငါမတိုင်မီတွေအများကြီးနှင့်ပြောဆိုသောနှင့် AASraw ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတည်ဆောက်ရန်ထိုက်သည်, ငါသည်အပုံပါဘဲ။
Diane Maxwell09 မှာ 21 / 2018 / 9: 05 နံနက်
wow, ဒီစာရင်းအတော်လေးလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ပါတယ်။ ငါယခုငါမလိုအပ်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုသိလို့ထင်ပါတယ်။ ငါတောင်မှ function ကို / ရည်ရွယ်ချက်သည်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရဘဲနေ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကယ်ရိုလိုင်းဖြစ်တဲ့ Warner09 မှာ 21 / 2018 / 8: 58 နံနက်
ငါတကယ်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်နောက်ကွယ်မှ "မှော်" တွင်မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ငါ orlistat ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါသို့သော်ပြောင်းလဲသွားတယ်! ငါဒီ list ထဲမှာအကောင်းဆုံးများထဲမှင်ထင်ပါတယ်။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 21 / 2018 / 3: 26 နံနက်
ဟိုင်းကစ်တီ ဆေးညွှန်းအတွက်သို့မဟုတ်တန်ပြန်ရန်အတွက်မူတည်သည်။ မင်းကိုကူညီဖို့ငါအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်တွေတောင်းခံတာကပိုကောင်းတယ်။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 21 / 2018 / 3: 14 နံနက်
ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်ုပ်တို့၏အများအပြားဖောက်သည်ကိုယ်အလေးချိန် powder.they ၏အမိန့်မျိုးရှိပါတယ်ကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကကိုချစ်ကပြောပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဘို့အကြောင့်မူတည်သည်မူးယစ်ဆေးအခြမ်းကသင့်ရဲ့ဆရာဝန်များအကြံပြုချက်များအောက်တွင်မှန်ကန်စွာသောက်သုံးသောယူရန်လိုအပ်ပါတယ် effects.So သိရသည်။
Stephanie Kamau09 မှာ 21 / 2018 / 12: 02 နံနက်
ဤမျှလောက်များစွာသောကိုယ်အလေးချိန်ဈေးကွက်ထဲမှာအမှုန့်နှင့်အကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောတဦးတည်းကိုရှာတွေ့ရှိပါသည်။ ငါမဆိုအပြောင်းအလဲများမရှိဘဲအားလုံးနီးပါးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်ကြိုးစားခဲ့ကြသူတွေကိုငါသိ၏။ ငါထွက်အလုပ်လုပ် natrually မဆိုဆေးညွှန်းဆေးယူမီအရှုံးအဆီမှပထမဦးဆုံး option ကိုဖြစ်သင့်ပါဘဲ။
ဗိုလ်ကြီးတဦး09 မှာ 20 / 2018 / 10: 28 ညနေ
ငါချုပ်ထဲက get ကဘာလဲဆိုတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒီယူနိုငျသညျ။ ငါသည်ငါ့ system ကို clean up လုပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါနှင့်အူလှုပ်ရှားမှုများပေါ်တက်ဖြေလျော့သည့်လှည့်ကွက်ပြုအံ့။
Mach09 မှာ 20 / 2018 / 9: 25 ညနေ
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအမြဲလူတိုင်းကောင်းသောကြည့်ဖို့လိုသည်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအခေတ်ရေစီးကြောင်းတက်ပါစေဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်နဲ့တူငါခံစားရတယ်။ စဉ်းစားမီဒီယာအားလုံးအချိန်ကိုအကောင်းရှာဖွေနေ၏မက်ဆေ့ခ်ျကို hammering ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ပိုကြည့်ကောင်းသွားပါစေဤကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်သို့မဟုတ်အဆီဆုံးရှုံးမှုဆေးပြားသုံးစွဲဖို့လိုအပျကွောငျးခန့်မှန်း
Bradley လာဗင်ဒါ09 မှာ 20 / 2018 / 3: 45 ညနေ
Clenbuterol နှင့် Salbutamol အဝလွန်ခြင်းကုသနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုးတက်အောင်အတွက်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောအသံ။ ယေဘုယျအားဤကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်သင်တစ်ဦးကျန်းမာဖန်တီးခြင်းအတွက်အလွန်အမင်းထိရောက်သောနှင့်ေူပာင်းလဲပုံရသည်။
Curt Rancher09 မှာ 20 / 2018 / 3: 40 ညနေ
ငါအမြိုးသမီးတထထိပ်တန်းအဖြစ်မထိုက်မတန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်! ငါသည်ဤဖြည့်စွက်သည်၎င်း၏အာဏာများအတွက် မှနေ. ၎င်းတို့ကိုထောက်ခံပေးရမည်နိုင်သူဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောခဲ့ရဲ့ချစ်ကြတယ်။ အဝလွန်လူနာနှင့်အတူတွေ့ရှိချက်အထူးသဖြင့်အထင်ကြီးစရာရှိကြ၏။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Lively Bianca09 မှာ 20 / 2018 / 5: 56 နံနက်
ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်အမျိုးမျိုးသောခွဲခြားမှုရှိသည်မသိခဲ့ပါ။ ငါသူတို့မလိုချင်တဲ့အဆီလည်းမီးလောင်အကြောင်းကိုအားလုံးခဲ့ကြသည်ထင်! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
လို, Barneys လို Winchester က09 မှာ 20 / 2018 / 5: 54 နံနက်
wow, ကိုယ်အလေးချိန်ကယ့်ကိုလမ်းပြန် 1800s ကိုသွား? ငါမဆိုဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်နှင့်ဤအချက်အလက်ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ဒီတော့ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားနေတာပါ!
နိုရာ09 မှာ 20 / 2018 / 4: 49 နံနက်
ဤစာရင်းတွင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဗိုက်အဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်မည်သို့ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးဖို့ရရန်မည်သို့အပေါ်သုတေသနဒါအများကြီးအသစ်သောအမှုအရာ, etc
Nikki09 မှာ 20 / 2018 / 2: 12 နံနက်
ကစမ်းသပ်ခြင်း၏နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်သွားပြီကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သောအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးကတည်းကရှိသမျှတို့ကိုငါသည်ဤအဆီဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုပါသည်။ သူများသည်ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီ burner, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အရည်အစားအစာဖြစ်နိုငျသညျ, ငါပိုပြီးအရှုံးဤလမ်း blly အဆီပိုနှစ်သက်မိပါတယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်ကယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
ခဲ့09 မှာ 20 / 2018 / 2: 04 နံနက်
Certilistat အဆီတိုက်လေယာဉ် use.I ဟာခန္ဓာကိုယ်အဆီလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူစုပ်ယူခံရကြသောအခါတကယ့်ရေရှည်မှာ၌ကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သင့်ကြောင်းအခြားအကောင်းဖြည့်စွက်သည်။
Fanny09 မှာ 19 / 2018 / 10: 47 ညနေ
ငါသွေးပေါင်ချိန်ရှိသူများအတွက် Lorsearin ကိုအကြံပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။
ချစ်09 မှာ 19 / 2018 / 10: 37 ညနေ
Olistat ကမဟာမိတ်များအစားအသောက်များတွင်ဆေးလုံးအဖြစ်ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချငါ့အဘို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါ out.since က food.I ကနေအဆီ burner တိုးမြှင့်စာခြေပိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်စုပ်ယူနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Sidney Moreno09 မှာ 19 / 2018 / 9: 53 ညနေ
Orlistat အလေးချိန်ဆုံးရှုံးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတူသောအသံ, ငါမပြုမီကုသဒီလိုမျိုးအကြောင်းကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးဒါပေမယ့်ငါသူတို့အလွန်အသုံးဝင်ဖြစ်ကြပြီးယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာအလေ့အထနဲ့ပေါင်းစပ်များစွာသောလူများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။
Kurt09 မှာ 19 / 2018 / 9: 21 ညနေ
ဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့အားကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်သလား? ကျွန်မပထမဦးဆုံးစဉ်းစားသင့်တစ်စုံတစ်ရာကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်းမရှိဆိုလိုပါသလော ငါအင်ဖိုခြုံငုံဒီနေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမယ့်ကောင်းသော post ကိုထင်ပါတယ်။
Kitty Pryde09 မှာ 19 / 2018 / 8: 53 ညနေ
ဒီယခုအခါနေရာတိုင်းမှာမရရှိနိုင်ပါသနည်း ဆေးညွှန်းဒါမှမဟုတ်တန်ပြန်ကျော်? ကျနော်တို့ကဒီမှာအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို၏မျိုးရှိတယ်လိုရှိ၏။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးဆေးဝါးကျန်တာတွေကဒီမှာအားလုံးဖြစ်ကြသည်။
Chatton09 မှာ 19 / 2018 / 8: 34 ညနေ
ငါအလေးချိန်အရှုံးအမှုန့်ရဲ့အစွမ်းထက်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။ အဲဒီဖြည့်စွက်တာအခါသင်နေတုန်းပဲပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းမလိုအပ်စဉ်းစားပါ။ ဒါပေမဲ့ဘလော့ဂ်ဖတ်နေခံစား!
Rae09 မှာ 19 / 2018 / 8: 28 ညနေ
ငါဘယ်လောက်အရှုံးအစာရှောင်ခြင်းအဆီဝမ်းမှနဲ့အတူအတော်လေးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ငါတံဆိပ်များကိုဖတ်ရှုနိုင်အောင်ငါသိသောအခြို့သောထုတ်ကုန်အသေအချာမသိ။ ယင်းအချက်အလက်ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ဒါကတကယ်ငါ့ကိုအစာရှောင်မည်ကဲ့သို့အရှုံးအလေးချိန်မှသိရန်ကူညီ
Landen Burrow09 မှာ 19 / 2018 / 3: 17 ညနေ
အဆိုပါ Cetilistat နှင့် Clenbuterol ဒြပ်ပေါင်းများကိုသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီးဆင်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းရှိပါတယ်။ Cetilistat ကြောင့် clen အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကကူညီနိုင်သည်, ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ကောင်းသောအစာခြေစနစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုငါအဘို့အ vouching ဆေးခန်းသက်သေပြချက်လေ့လာမှုတွေရှိပါတယ်ပေးထားသောဤအဆီဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်တောင်းဆိုလူနာကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Mozer Torancher09 မှာ 19 / 2018 / 1: 53 ညနေ
ဤရွေ့ကားမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တွေ့ရှိချက်များမှာ! သွေးဖိအားအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနှင့်များသောထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင်တစ်ဦးဖြည့်စွက်ထဲတွင်ရှာတွေ့မှအဖိုးတန်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ခန်း, လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များ, အစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်များ, စတာတွေကဤပူအကြောင်းအရာများဖြစ်ကြပြီးကိုယ်ကချစ်ငါငါ့ကိုယ်အလေးချိန်အစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်အဘို့အလွန်အသုံးဝင်သည်ထင်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Justin Dee09 မှာ 19 / 2018 / 10: 41 နံနက်
ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်ကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှနှင့်ကိုယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုးစားနေမမြင်မိပါဘူး။ ငါများသောအားဖြင့်တစ်ဦးလေးနက်အစားအသောက်များတွင်သွားကယ်လိုရီအရေအတွက်နှင့်ကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုပြုပါနှင့်အားကစားရုံမှာဒါခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အောင်မြင်ကိုယ်အလေးချိန်။
Marco Antonio09 မှာ 19 / 2018 / 10: 39 နံနက်
ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်ကြိုးစားနေအတွက်စိုးရိမ်ပါတယ်, သို့သော်ဤဆောင်းပါးတစ်နည်းနည်းနဲ့ငါ့ကိုတစ်ခုကတကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်မည်သို့မည်ပုံထိုသို့အပ်ပေးတော်မူ၏။ ရုံဤမျှလောက်များစွာသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသင်အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးသင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ရာ decipher ဖို့ရှိသည်အကြောင်း, ထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်။ တိုင်ပင်ဆရာဝန်များကဖြစ်ကောင်းလည်းကောင်းတစ်ဦးက start ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Charmaine ဘုရှ်09 မှာ 19 / 2018 / 9: 06 နံနက်
Orlistat ငါ့အဘို့က၎င်း၏မှော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်အလေးချိန်တစ်ဦးတည်းအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကယ့်ကိုကျွန်တော်အလိုရှိကြသည်တွင်ရလဒ်ကြည့်ဖို့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကျန်းမာ / မျှတသောအစားအစာနှင့်အတူကပေါင်းစပ်သင့်ပါတယ်။
ယောနသန်သည် Gordon ကမြင်ပါတယ်09 မှာ 19 / 2018 / 9: 03 နံနက်
wow ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများအားလုံးလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ကြသည်။ ယခု2နှစ်ပေါင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြနှင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မအနိုင်နိုင်ရလဒ်များကိုမြင်နေတာပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်တာကြိုးစားပြီးအချိန်ပါပဲ။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 19 / 2018 / 5: 46 နံနက်
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေအဘယ်သူမျှမပူပန်။ ကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်တိုင်းမူးယစ်ဆေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ သို့သော်၎င်း၏မူတည်ပါသည်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာသူတို့ကို ယူ. ကြောင့်အားကစားနှင့်အတူပိုကောင်းဆက်စပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကသင်ကကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်ကနေပိုပြီးအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။ တချို့ကဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ဆီကတချို့ sibutramine အမှုန့်နှင့် lorcaserin အမှုန့်အမိန့်ထုတ်ကြသူတို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ကိုသူတို့ကအရမ်းချစ်ကြသည်ကပြောပါတယ်။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 19 / 2018 / 5: 37 နံနက်
သင့်သုံးသပ်ချက်များများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တိုင်းမူးယစ်ဆေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ အခြေအနေအရပဲ။ သို့သော်လည်းငါသည် lorcaserin အမှုန့်နှင့် orlistat အမှုန့်ကိုသင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' အတှေ့အကွုံအရသိရသည်ဘို့ကောင်းသောစိတ်ကူးများဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် lorcaserin အဘို့ဟုမကြာသေးမီကဘီဘီစီအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြထားပြီးထိုသို့လျော့နည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။https://www.bbc.com/news/health-45319393
Pascal09 မှာ 19 / 2018 / 3: 21 နံနက်
FDA နှင့် Japan မှထောက်ခံချက်များအရဤကိုယ်အလေးချိန်များသည့်မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုသောက်သုံးခြင်းသည်မည်သည့်ဆိုးကျိုးမျှဖြစ်လိမ့်မည်မထင်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာအစီအစဉ်အပြင်၊
Autus09 မှာ 19 / 2018 / 3: 11 နံနက်
ဒါဟာအကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်တခုအဖြစ်ရန်သင့်အားကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအရှုံးဖိုရမ်များနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အဖြေကိုခဲ given.I တကယ်ဤအချက်အလက်လိုအပ်သောသူတို့ကိုမြင်ရရနျမြျှောလငျ့များမှာအလေးချိန်အပေါ်ဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုဖတ်ပါ။
Lisa ကို Nataliany09 မှာ 19 / 2018 / 12: 58 နံနက်
ငါထို့ကြောင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးအမြဲငါ့အဘို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်, စားသောက်ကိုချစ်။ ဒီဖြည့်စွက်အစားအစာအပေါ်ကိုသွားစရာမလိုဘဲငါ့ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်နိုင်လျှင်, ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကြီးပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒါဝိဒ်သည် Tjoe09 မှာ 18 / 2018 / 10: 21 ညနေ
ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်ကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှနှင့်ကိုယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုးစားနေမမြင်မိပါဘူး။ ငါများသောအားဖြင့်တစ်ဦးလေးနက်အစားအသောက်များတွင်သွားကယ်လိုရီအရေအတွက်နှင့်ကယ်လိုရီလိုငွေပြမှုပြုပါနှင့်အားကစားရုံမှာဒါခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အောင်မြင်ကိုယ်အလေးချိန်။ ရိုးရှင်းစွာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအပေါ်မှီခိုသူတို့လိုချင်တဲ့အလေးချိန်မရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဒါပေမယ့်ငါသိမြင်ထားသောအဝလွန်လူတခြို့ကအရှုံးအလေးချိန်မှထိုသူတို့အဘို့ခက်ခဲသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းကိုယ်အလေးချိန်တက်ဘလက်သူတို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အဲလက်စ် Summers09 မှာ 18 / 2018 / 8: 45 ညနေ
အားလုံးအိပ်ရာအာလူးအလေးအနက်ထားဒီမူးယစ်ဆေးကို ယူ. သူတို့အထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်း cant သောသူတို့အဘို့အများကြီးစိတ်ဖိစီးမှုမရှိပဲကိုယ်အလေးချိန်နိုငျပုံကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်များကိုဖြစ်စေလျက်, ကျန်းမာသောအစားအစာကိုစားစေခြင်းငှါအကြံပြုကျန်းမာအစားအစာများကိုစားကြလော့။ အရှုံးအဆီမှအစာရှောင်ရာလမ်းမကအစာစားခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်
Scott Summers09 မှာ 18 / 2018 / 8: 26 ညနေ
ကျွန်ုပ်သောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းပါကကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်ကိုအရင်မေးရမည်။ ဒီဟာအခုတောင်ရနိုင်သေးလား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က sibutramine နဲ့ orlistat အမှုန့်အကြောင်းအနည်းငယ်ပဲသိတယ်။ ငါတစ်ခုခုလုပ်ပြီးမှပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည်။
Moz Chesk09 မှာ 18 / 2018 / 3: 07 ညနေ
ငါသည်သင်တို့ကိုဤအဖြည့်စွက်သုံးစွဲဖို့လုံခြုံပြီးထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းအာမခံနိုင်သည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ Sibutramine အမှုန့်နှင့် Lorcaserin အမှုန့်ကဲ့သို့အစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်သူတို့စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြုမူဆက်ဆံဘယ်လိုထဲမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးပုံရသည်။ ငါဒီဆေးတွေကသူတို့ကိုဂုဏျတငျဖို့အားလုံးကိုသုတေသနနှင့်အတူလူရဲ့လူနေမှုအပေါ်တစ်ဦးသဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Maury Cheskes09 မှာ 18 / 2018 / 3: 00 ညနေ
ဒါဟာထိုသူအပေါင်းတို့ဆေးခန်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့သက်သေပြခဲ့ကြအကြီးပါပဲ။ ဒါဟာသူတို့ထဲကတချို့အစာခြေခြင်းနှင့်မီးလောင်သောအဆီနှင့်အတူ Orlistat နှင့် Synephrine ကဲ့သို့အလုပ်မလုပ်ကိုမည်သို့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Kuttan09 မှာ 18 / 2018 / 10: 50 နံနက်
ကောင်းသောအသံဒါပေမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအလေးချိန်အကြောင်းကို worreied ရှိပေမယ့် tummy အကြောင်းပိုမိုစိုးရိမ်နေကြပေကအားလုံးကိုသည်အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိုကဲ့သို့သော sibutramine အဖြစ်, ok ဖြစ်ကြသည်လျှော့ချနိုင်, ငါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရဲ့စိတ်ပူလည်းအချို့သောကွိုးစားသျောလညျးငါအလိုရှိ၏။ ကူညီပါ?
မာ့ခ်: P09 မှာ 18 / 2018 / 10: 46 နံနက်
Charlene, G09 မှာ 18 / 2018 / 10: 43 နံနက်
ငါအလေးအနက်ထားဖြည့်စွက်အများကြီးယူကြပြီပေမယ့်ဘာမျှအစဉ်အဆက်အကြှနျုပျအဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသူအချို့တကယ်မကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစေ၏။ ဒီဆောင်းပါးကဒီဖြည့်စွက်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်စေ့စေ့စပ်စပ်သတင်းအချက်အလက်ပြကောင်းတဲ့ပါပဲ။ ငါအချို့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားလည်းအချို့သောကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်ကြိုးစားရန်ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မဆိုအကြံပေး?
ဖက်တီး Patti09 မှာ 18 / 2018 / 9: 37 နံနက်
orlistat အမှုန့်ဖြင့်တက်ဘလက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကိုမဆိုဖက်တီးအစားအစာများ, ဒိန်ခဲသို့မဟုတ် KFC မစားနိုငျ! ငါသည်သင်တို့ကိုငါသိ၏ဗိုက်အောနှင့် ... အတူတက်အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ Hahaha
Amil-lionaire09 မှာ 18 / 2018 / 9: 33 နံနက်
ufan09 မှာ 18 / 2018 / 8: 46 နံနက်
ငါဇီဝြဖစ်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောကြောင့်ကတည်းက Lorcaserin HCL အမှုန့်ထုတ်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်လည်းစားစရာဘို့တိုက်တွန်းဖိနှိပ်နိုင်ဘူး။ အစားအသောက်နှင့်အတူဝေးလုပ်နေတာအမြဲငါ့အကြီးမြတ်ဆုံးပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး09 မှာ 18 / 2018 / 8: 39 နံနက်
ယခုတွင်ငါသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုံးရှုံးရရန်ကြိုးစားရန်ရှိသည်ကတည်းကဒီ post ငါ့အဘို့တကယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ post ကယ့်ကိုအချိန်မီအဆီသုံးစွဲဖို့လည်းမီးလောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ကောက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါငါ့အဘို့အရာတွေအကြောင်းကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်တကယ်မဝေးတော့တဲ့ future.This အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ် post ကိုသူတို့ကိုမဝယ်။
Carrie09 မှာ 18 / 2018 / 5: 17 နံနက်
ကိုယ့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့မဖြစ်မှီငါသည် laxative ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ငါကတာကိုရပ်တန့်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ငါ့ကိုအပေါ်မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ပါဘဲ။ ငါဆဲကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်ဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုချီတုံချတုံဖြစ်၏။
လော်ရာ09 မှာ 18 / 2018 / 4: 27 နံနက်
ငါအရင်ကကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်စာအများကြီးစားခဲ့ပေမယ့်ကံမကောင်းတာကသူတို့ကငါ့အတွက်တကယ်အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဒီအလွန်သိကောင်းစရာများဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန်ဓာအတိုင်းသာကြိုက်နေသည်။
AJ09 မှာ 18 / 2018 / 1: 40 နံနက်
ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်မှုန်တွေအများကြီးဈေးကွက်ထဲမှာရှိထွက်ဖြစ်ကြောင်းအတော်လေးအံ့သြသွားမိပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့လက်ရှိလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြည့်စွတ်ရန်တဦးတည်းတစ်နေ့နေ့မှာယူပြီးစဉ်းစားခဲ့တာ။ ကိုယ့်ကိုပင်တန်ပြန်ပိတ်ထားတဦးတည်းကိုဝယ်ခြင်းငှါအထူးဆေးညွှန်းလိုအပ်ပါတယ်တူသောသို့ရာတွင်ထိုသို့ကြည့်? သို့မဟုတ်ငါဆေးညွှန်းအဘို့မဆိုလိုအပ်မှုမရှိဘဲရနိုင်သည့်အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါသလဲ
Pritesh Vishwakarma09 မှာ 18 / 2018 / 12: 47 နံနက်
ဖွဲနု09 မှာ 17 / 2018 / 11: 40 ညနေ
ကမ္ဘာတွင်အကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန် supplements.I မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်စွက်၏တစ်ဦးကကောင်းစွာအသေးစိတ်စာရင်း well.Just အနာဂတ်ရည်ညွှန်းအဘို့ဤစာမျက်နှာ bookmark လုပ်ထားတဲ့အဖြစ်ဆေးထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကဆက်ပြောသည်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်အစဉ်အမြဲထိရောက်သောရှိပါတယ်။ အကြောင်းမူကား,
Bassy09 မှာ 17 / 2018 / 11: 34 ညနေ
ဤသူသည်ငါတစ်ကိုယ်အလေးချိန်ခရီးပေါ့နဲ့ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းကတည်းကငါ့အအလေးချိန်နှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြ, ငါ့ကိုအဘို့ကြီးစွာသော Post ဖြစ်ပါတယ်။ Sibutramine HCL (Meridia) ထုတ်စစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုငါဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ရ CAS.it
Vikram Parmar09 မှာ 17 / 2018 / 10: 57 ညနေ
Jiffy Rando09 မှာ 17 / 2018 / 9: 37 ညနေ
Meds + လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်သင်တန်း၏သငျ့လျြောသောအစာစားကိုယ်အလေးချိန်၌ငါ၏လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအဆီအပေါ်တစ်နည်းနည်းစောင့်ရှောက်ဖို့ယခုကရပ်တန်ပေမယ့်။ ငါနောက်ကျောကိုငါ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရသည့်အခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီသုံးပါလိမ့်မယ်။
Erza Scarlet09 မှာ 17 / 2018 / 9: 23 ညနေ
ဘယ်လိုဆေးဝါးများအကြောင်းကိုဘယ်သူမှဆွေးနွေးပွဲငှါလာသလော အမြဲဒီမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်မှာသို့မဟုတ်ပြဇာတ်အတွက်အာဟာရခြမ်းကဤခေါင်းစဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါဒါပေမဲ့ဒီ meds စားပွဲပေါ်ဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းသို့သော်ဖြည့်စွက်။ 2
Janice09 မှာ 17 / 2018 / 10: 38 နံနက်
ငါတစ်ခုသင့်လျော်သောအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်ရွေးချယ်ရာတွင်န်းကျင်ထိုကဲ့သို့သောအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဤဆောင်းပါးကိုဖြတ်ပြီးလာသည်ဟုအလွန်ဝမ်းသာတယ်ဒါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ ဒါကကျွန်မကိုကျွန်မအကြှနျုပျအဘို့ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုစေနိုင်သည့်အတွက်တချို့ကွန်ကရစ်မဖောင်းပွသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
7 ၏စျေးကွက်အတွက် 2018 အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)	Armodafinil ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)